नग्न शरीरमा केको सौन्दर्य ? – मुरलीधर :: a1nepal.com.np
नग्न शरीरमा केको सौन्दर्य ? – मुरलीधर
विसं २०१२ मा सिराहामा जन्मेका मुरलीधर नेपाली गीतसंगीत तथा सिनेक्षेत्रमा चिनाइरहनुपर्ने नाम होइन । बुबा नथुनी मिझारको सांगीतिक यात्राबाट प्रभावित भई संगीतमा लागेका मुरलीधर सन् १९७८ मा भारतीय राजदूतावासबाट छात्रवृत्ति पाएर संगीत पढ्न मुम्बई गए । त्यहाँ उनले संगीत मार्तण्ड पद्मविभूषण पण्डित जसराजसँग १२ वर्ष शास्त्रीय संगीतको अध्ययन गरे । बिस्तारै उनी संगीतमा मात्र सीमित भएनन्, चलचित्र बनाए, खलनायकको भूमिकामा पनि अभिनय गरे । उनले महाभारतका सुरुका ६ भागमा कृपाचार्यको भूमिका निभाए । झन्डै तीन दर्जन गीत गाएका मुरलीधरसँग पत्रकार प्रेम वास्तोलादवारा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आफ्नो काम नै फिल्म बनाउने भएकाले म फिल्म बनाउनमै व्यस्त छु ।
कुन भाषाको चलचित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
मैथिली र भोजपुरी भाषामा चलचित्र बनाइसकेको छु । अहिले नेपाली भाषामा
बनाउँदै छु ।
नेपाली चलचित्रमा आएका परिवर्तनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मुख्य कुरा त के हो भने परिवर्तन हरेक क्षेत्रमा हुन्छ । तर, परिवर्तन भए पनि राम्रो ढंगबाट होस्, विकृति आउनुभएन । नेपालमा फिल्मका विषयवस्तु यति धेरै छरिएका छन् कि यी विषयमा फिल्म बनाएरै सकिँदैन । तर, ती कथावस्तुलाई कसरी फिल्ममा उतार्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । परिवर्तनलाई स्विकार्नुपर्छ तर राम्रो परिवर्तनलाई मात्र दर्शकले स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरा फिल्म बनाउनेले बुझ्नुपर्छ ।
नेपाली सिनेक्षेत्र किन फस्टाउन नसकेको होला ?
केही पनि जानकारी नभएका मानिस यो क्षेत्रमा आउनै सक्दैनन् । पछिल्लो समय एक/दुईवटा फिल्मले विज्ञापन गरेर, विभिन्न खालका प्रोमो प्रसारण गरेर फिल्मलाई हिट बनाउन खोजेका त छन् तर यस्ता चलचित्र दिगो हुँदैनन् । पछिल्लो समयका केही फिल्ममा विकृति आएको छ, यस्तो विकृति आउनु राम्रो होइन ।
हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाएर राख्न र अहिले नेपाली फिल्ममा देखिएको अश्लीलतालाई हटाउन के गर्नुपर्ला ?
यसमा सबैभन्दा जिम्मेवार त चलचित्र विकास बोर्ड नै हो । त्यसपछि सेन्सरबोर्ड हो । यी त नियामक संस्था न हुन् । नराम्रो कुरा बनाउनुभएन । चलचित्र बनाउनेको पनि गल्ती छ यसमा । भान्सेले नै राम्रो चिज पस्केपछि नराम्रो त हुँदै-हँुदैन नि । अध्ययन-अनुसन्धान गरेर मात्र चलचित्र बनाउनुपर्छ ।
कसरी बनाउने त राम्रा चलचित्र ?
विदेशी चलचित्रमा बेडसिन धेरै हुन्छन्, बगैँचामा पनि किससिन हुन्छन् किनकि त्यो त्यहाँको संस्कृति हो । हामीले भने आफ्नो संस्कृति बिर्सेर विदेशीको नक्कल मात्रै गरेका छौँ । हाम्रो पहिचान के हो त ? यो कुरालाई त हामीले विचार गर्नुपर्‍यो । आधुनिक त हुनुपर्छ तर आधुनिकताका नाममा हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई त्याग्नु पनि भएन । यौनलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा हाम्रै हातमा छ । तपाईंले एउटा बुर्का लगाएको महिलालाई हेर्नुभयो भने उसको सौन्दर्यबारे चासो राख्नुहुन्छ । उसको शारीरिक बनावटबारे सोच्नुहुन्छ । तर, सबै नांगै छ भने त्यसमा केको सुन्दरता, केको ग्ल्यामर ।
चलचित्रमा तपाई खलनायककै भूमिकामा देखिनुहुन्छ नि किन ?
त्यो मैले चाहेर होइन । निर्देशकले नै त्यस्तो भूमिकामा मलाई छानेपछि त गर्नैपर्‍यो । फेरि खलनायकको भूमिका आफैमा कठिन पनि छ । फिल्ममा हिरोका त समर्थक धेरै हुन्छन्, हिरोइन पनि साथैमा हुन्छे, तर खलनायकको कोही हुँदैनन् । -लामो हाँसो….)
नेपाली फिल्ममा गीत गाउने अफर आउँदैनन् ?
खासमा म यहाँ बस्दिनँ । त्यसले गर्दा पनि अवसर गुम्ने गरेका हुन् । कोही पनि फिल्मनिर्माता विदेशमा गएर गीत रेकर्ड गराउन चाहँदैन । उसलाई खर्चको हिसाबले पनि महँगो पर्छ । यति कुराका लागि मुरलीधर नै कसले खोज्छ र ?
‘उडायो सपना सबै हुरीले…’ भन्ने गीत धेरै चल्यो, यो गीतको रचना कसरी भयो ?
जीवनमा एउटा त्यस्तो समय आउँछ जब सबैको मायाप्रेम बस्छ । विभिन्न उतारचढाव आउँछन्, त्यही क्रममा यो गीतको रचना भएको थियो । तर, मैले आजसम्म त्यस्तो कर्म गरिनँ जसले मलाई आज पछुतो होस् । गीतहरू भोगाइ नै हुन् । यो आफ्नो जीवनमा नै घटेको पनि हुन सक्छ । अरू कसैको देखेर पनि हुन सक्छ । त्यही क्रममा मेरा धेरै गीत लेेखिएका छन् । ‘म रातभरि दियोसरी बलिरहेँ-जलिरहें, म दिनभरि हिउँसरी बगिरहेँ-गलिरहेँे’ जस्ता धेरै गीत मैले लेखेको छु ।
नेपाली कलाकारको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पहिलाको तुलनामा धेरै परिवर्तन आएको छ । अहिले नेपाली कला क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले त्यति गाह्रो छैन । कलाकारले पनि राम्रो गरिरहेका छन् । हाम्रा पालामा त धेरै दुःख थियो । तर, अहिले कलाकार विदेश जान पाउँछन् । आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि कलाकारले राम्रै कमाइरहेका छन् । यद्यपि, नेपाली फिल्ममा अलि बढी विकृती आएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
← हदासा एन्केरेनमा उपचाररत विष्णुमायाको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार	एनआरएन इजरायलको आयोजनामा गणतन्त्र दिवश भव्यताका साथ सम्पन्न (फोटो फिचर) →